စွဲလမ်းမှုကနေတူရကီရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြင်ပမှာရှိတဲ့ရထားသီချင်းများနှင့်အတူချပစ်လေ၏ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး78 Karabükစွဲလမ်းမှုကနေနိုင်ငံခြားရေးပစ်ချဖို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တူရကီနှင့်အတူအမျိုးသားရထားရထား
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 78 Karabük, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တူရကီKarabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (Kardemir) INC ပစ်ချပထမဦးဆုံးအကြီးစားသံနှင့်သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း၏အမြစ်အောက်မှာနှစ်တွင် "အမျိုးသားရေးစက်မှု drive ကို" တွင်စတင်ခဲ့ပြီးသောဂရိတ်ခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Ataturk xnumx'l သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန် 1920 '' အရာသည်ယနေ့၏ပြည်သူပိုင်အားထုတ်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး, တူရကီရဲ့သာရထားလမ်းထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်, တူရကီနိုင်ငံခြားရေးရထားလမ်းပေါ်တွင်မှီခိုရာမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ပါတယ် ..
အများအပြားနိုင်ငံအတွင်းအဆောက်အဦး, ထို့ကြောင့် "စက်ရုံထူထောင်စက်ရုံများ" ခေါင်းစဉ်KARDEMİR၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ဆောင်ပေးသောအဘယ်သူ၏အမြစ်လည်း 13 ၏နှစ်ပတ်လည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူစွမ်းရည်၏တထောင်တန်ချိန်စတင်ကာလဧပြီလ3၌ထားခဲ့ကြသည်Karabük, 1937 ၏ 150-ဂဏန်းရွာ, ယနေ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှု၏အကြောင်းကို3တန်ချိန်သန်းလုပ်ဆောင် ။
ဘီလီယံကိုပေါင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည် 2003 နိုင်ငံတော်သမ္မတ xnumx't အစိုးရမူဝါဒနှင့်အတူပြန်လည်စတင်အမျိုးသားရေးအောင်မြင်မှုများမှသည် Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏သွန်သင်ရထားလမ်းအတွက်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, 16 နှစ်ပေါင်း။ မြန်နှုန်းမြင့်အမြန်ရထားနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအပါအဝင်တစျထောငျကီလိုမီတာ 133 2132သစ်ကိုမီးရထားလိုင်း၏တထောင်ကီလိုမီတာတည်ဆောက်ခဲ့, တူရကီတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တူရကီ, 149 11 နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သက်တမ်းတိုးသမားရိုးကျမီးရထားလမ်း၏တထောင်ကီလိုမီတာခုနှစ်တွင်ခန့် 497 တထောင်ကီလိုမီတာမီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးနေဆဲဖြစ်သည်။
အသစ်ကမီးရထားလိုင်း၏အကြောင်းကို 13 တထောင်ကီလိုမီတာအောင် TCDD, အံနူးညံ့နှင့်အလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သာအမျိုးသားရေးအမှတ်တံဆိပ်ယနေ့တူရကီရဲ့ရထားလမ်းKARDEMİRကနေသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ် 2007 အတွက်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်, Anatolia ဆက်လက်ရထားလမ်းထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တူရကီအနေဖြင့်နိုင်ငံခြားသတင်းရင်းမြစ်အပေါ်မှီခိုနေမှထမြောက်အပြည့်အဝသံမဏိလက်နက်နှင့်အတူခြုံနေစဉ်။
1950 နီးပါးမေ့လျော့ရထားလမ်းပြီးနောက် xnumx't ကနေနောက်တဖန်တစ်ပြည်နယ်မူဝါဒကအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အနာဂတ်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒများသယ်မည့်စီမံကိန်းတဦးတည်းအသက်တာကနေဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီ, 2003 အဆိုပါတူရကီ-Konya, xnumx't Konya, Eskisehir, xnumx't တူရကီနှင့်ကမ္ဘာအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အခြေစိုက်န်ဆောင်မှုအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား, 2009, ဥရောပနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အဖြစ်လိုင်း၏ 2011 တူရကီ-Eskisehir ဖွင့်လှစ် '' xnumx'ıncအနေအထား high-speed ကိုရထားနည်းပညာနှင့်အတူနိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Bursa, Izmir, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun နှင့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ Kocaeli မြို့ပြရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်အမှုဆောင်, Diyarbakır, Mersin, Erzurum, Erzincan, Urfa, Denizli, Sakarya နှင့် Trabzon '' ဝန်ဆောင်မှုသို့ entry ကိုနှင့် တွဲဖက်. အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကြောင့်နောက်ထပ်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး၏ဝေစုတိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
တူရကီရဲ့အသစ်ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် 15 ပြည်နယ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများလိုင်းနှင့်လည်းကုန်စည်နှင့်ခရီးသည်ရထားလမ်း၏ဝေစုကိုတိုးပွါးစေလူဦးရေ၏ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Yildirim ယခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံခြားသတင်းရင်းမြစ်အပေါ်မှီခိုအဆုံးသတ်မည် 10 28 / 09 / 2013 ဒေသခံတွေလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်သင်ကနိုင်ငံခြားမှီခိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်, ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တင် 10 နှစ်များတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မရိန်းတပ်သားများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, တူရကီ ": ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Yildirim ယခုနှစ် 10 စဉ်အတွင်းနိုင်ငံခြားသတင်းရင်းမြစ်အပေါ်မှီခိုအဆုံးသတ်မည် နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေမှော်açıkladı.türkiyeအာကာသလွန်းပျံယာဉ်စစ်ဆင်ရေး "dedi.bak Lightning, ပို့ဆောင်ရေး xnumx'inc, ထိုကောင်စီအစည်းအဝေးမှာယူပင်လယ်ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ, ကဏ္ဍအစီရင်ခံစာများနှင့်ကောင်စီကောက်အာရုံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာအနာဂတ်မှာလာမည့်နှစ်တွင်, တူရကီစုပြုံနှင့်အတူ လျှပ်စီး, ယနေ့ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအတွက် 11 12 လမ်းကွန်ယက်၏တထောင်ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး, သူရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး 8 နှစ်အတွင်းကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အများဆုံးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ high-speed ကိုရထား ...
မှီခိုလျှော့ချဖို့ URAYS ပွငျစီမံကိန်း 27 / 03 / 2019 ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်စီမံကိန်းများကိုမတ်လ 26 2019 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရထားစနစ်စမ်းသပ်မှုနှင့်သုတေသနစင်တာတွင်စီမံကိန်း (URAYS ငါ) ကွန်ဖရEskişehirကျင်းပခဲ့သည်။ ၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ဆက်လက် အစည်းအဝေး; သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ Selim Dursun ဒုတိယဝန်ကြီး, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး Hasan Büyükdeniz TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager Erol Arikan, TULOMSAS Hayri Avci, Anadolu တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အရုဏ် Ertan Çomaklıနှင့်ရထားလမ်းကဏ္ဍ၏သက်ဆိုင်ရာအမည်များကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး Hasan Büyükdeniz, တူရကီရဲ့ရထားလမ်းစနစ်များကိုသူတို့ကဒီကိစ်စတှငျလုပ်တိုးတက်မှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကို drawing ကနေထုတ်လုပ်တာစင်တာဖြစ်လာချင်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
1.1 ဘီလီယံကိုပေါင်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲဝန်ကြီးဌာန၏တစ်ဝက်တစ်ဝက် gaziray 23 / 04 / 2018 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Arslan, "ကျွန်ုပ်တို့၏GAZİRAYစီမံကိန်းမြူနီစီပယ်နှင့်အတူစေပြီ။ 1 ဘီလီယံခန့် 100 သန်းပေါင်စီမံကိန်းကို 580 သန်းပေါင်ကျနော်တို့ကမြူနီစီပယ်၏သန်းပေါင်တွေ့ဆုံရန် 520 အစိတ်အပိုင်း။ နှစ်ဦးစလုံး6high-speed ကိုမီးရထားခရီးသည်ပိုင်မှပင်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ 2019 ၏အရှေ့ပိုငျးအစ ကျနော်တို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ။ " သူကပြောပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Gaziantep မက်ထရိုသက်သာခြင်း, ထိုသဲအခမ်းအနားဟာ gaziray မှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Gaziantep နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုတနျဖိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ပြုလုပ် 180 နိုင်ငံများသို့မြို့တော်ရဲ့ပို့ကုန်ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ GAZİRAY "အဖြစ်ကျနော်တို့အချိန်လွှဲပြောင်း Arslan အတွက်အတွင်းစိတ်-မြို့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးပြုပါလိမ့်မယ် ...
ပြင်ပမှီခိုမှုကျဆင်းနေ, ဇာတိမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Creating 25 / 08 / 2012 ပြည်နယ်မူဝါဒနှင့်ရထားလမ်းစည်းရုံးခြင်းအစပျိုးခဲ့သည်အဖြစ်လျစ်လျူရှု၏တစ်ဝက်တစ်ရာစုပြီးနောက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအဖြစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင် 10 ရထားလမ်းကိုထပ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အရေးအပါဆုံးညွှန်ပြချက် TL 2003 483 2012 ဘီလီယံကို TL-ခြံတိုးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခဲ့သည့်ရထားလမ်းအတွက်တစ်နှစ် 14,57သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါပဲ။ Sakarya အတွက် HACON (တူရကီ), asas (တူရကီ), စက်ရုံတည်ထောင်ခဲ့ Hyundai-TCDD ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူ EUROTEM မိတ်ဖက်။ လက်ရှိတွင်စက်ရုံမှာထုတ်လုပ် Marmaray အစုံ။ Çankırıမြန်နှုန်းရထားအတွက်ပူးပေါင်း TCDD စက်ရုံ (VADEMSAŞ), Erzincan နှင့် Sivas Ray စွဲစေစက်ရုံ Switch ...
Özfatur: ကျနော်တို့နိုင်ငံခြားရထားလမ်းအပေါ်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီ 23 / 04 / 2014 Özfatur: ကျနော်တို့သမ္မတဟောင်းဒေါက်တာ၏နိုင်ငံခြားရထားလမ်း.İzmတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီ Burhan Özfatur, 'အမျိုးသားရေး' '၏အာဏာရ AK ပါတီပဒေသာ၏အစိတ်အပိုင်းပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့စကားရပ်အလုံးစုံတို့အဘို့အချည်းနှီးသောကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ တူရကီရဲ့အမည်, နိုင်ငံခြားÖzfutarအပေါ်အမျိုးသားရေးစီမံကိန်းကိုမှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီသောသူတို့အားလည်းကာကွယ်ရေးစက်မှု Undersecretary Murat Bayar ၏ထုတ်ပယ်ဝေဖန်သော။ ဟု ငါအကျိုးစီးပွားမလွယ်ကူသူတွေးမိ "ဟုသူÖzfaturသတ်မှပိုမိုတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဗျူရိုကရက်များ၏တဦးတည်းခဲ့ကြောင်းဟုဆိုကာကောင်းစွာရည်ရွယ်ချက်များအလုပ်ကြိုးစားသူ, အောင်မြင်သော? အဖြစ်ဝေးငါသိအဖြစ်သူအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများကဒေသခံရှယ်ယာတိုးမြှင့်ဖို့အလေးအနက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖေါ်ပြခြင်းတဦးတည်းခဲ့ပေမယ့်သင်တန်းကလက်ရှိအစိုးရများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Yildirim ယခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံခြားသတင်းရင်းမြစ်အပေါ်မှီခိုအဆုံးသတ်မည် 10
1.1 ဘီလီယံကိုပေါင်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲဝန်ကြီးဌာန၏တစ်ဝက်တစ်ဝက် gaziray
ပြင်ပမှီခိုမှုကျဆင်းနေ, ဇာတိမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Creating
သွေးလှူဒါန်းခြင်းအဘို့တန်းစီဖို့အတ္တန်ထမ်း input ကို